‘तीन वटा टुवोर्ग बियर किन्दा एउटा सित्तैमा…।’ अंग्रेजी नयाँ वर्षको अघिल्लो साँझ दरबारमार्ग र ठमेल आसपास घुम्दा हरेक होटल, रेष्टुरेन्टमा यो सूचना ठूलाठूला अक्षरमा टाँगिएको देखियो। स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक त्यसमा पनि युवायुवतीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो यी ठाउँहरूमा।
अर्को साथीले मुख फोरेरै भने ‘हामी तिम्रो बिहेमा आउँछौ, हाम्रो बानी तिमीलाई थाहा छ खानपानको व्यवस्था अलग्यै भएपनि हुनुपर्छ। रक्सी , मासु खान पाइँदैन भने खल्लो भइहाल्छ नि’ … कार्ड दिने साथी अन्यौलमा परे जवाफ दिन सकेनन्। ‘म व्यवस्था गर्नु तिमीहरू आउनुपर्छ’ तत्कालको लागि चित्त बुझाइदिए तर मनमा अनेकन तर्कना मडारिन थाले। ‘रक्सी, मासु नभइकन साँच्चिकै भोज, भतेर चल्दैन? विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, सेमिनार, जन्मदिन, साथीभाइ भेटघाट जे हुँदापनि रक्सी नभइनहुने?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ५, २०७४ ०८:५६:०३